I-Icon Luxury Suites - I-Airbnb
I-Icon Luxury Suites
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguZarmina
Ibekwe kwi-18 km-raiwind road Lahore.
Iyunithi nganye inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, ioveni yemicrowave, iinkomo zeti, itoaster, kunye nesikhenkcezisi esipheleleyo. Amagumbi amabini okwamkela iindwendwe anezitulo zomyili kunye nescreen esisicaba seTV, indawo yokutyela enombono wegalufa oLush oluhlaza. Amagumbi amabini okulala amagumbi okulala amabini aneebhafu ezincamatheleyo abandakanya izikrini zeshawa kunye nezixhobo zokomisa iinwele. Ipaki yemoto ekhuselekileyo kunye ne-wifi.
Sikwabonelela ngokucoca okomileyo/impahla kunye nompheki kwiimfuno zeenkonzo ngeendleko ezongezelelweyo.
Akukho Dating izibini
Sikwanazo nezibonelelo zokulungiselela i-airbecue yomoya ovulekileyo kwindawo yethu yokuhlala elawulwa kakuhle enamanzi kumbindi weCourse yethu yeGalufa eluhlaza ubuncinci kangange-30 kunye neendwendwe.
Ngaphezulu kwayo yonke indawo yindawo ekhuselekileyo kakhulu enamagadi agade indawo 24/7. Le ndawo ivakala njengekhaya kwaye umntu unokuhlala kusapho olupheleleyo kunye nomoya okhuselekileyo.
IMasjid yethu entle yaseMoroccan enekhaphethi eluhlaza okwesibhakabhaka namhlophe iLuxury ikhaphethi kumgama nje omde ukusuka kwindlu.
Simi kakuhle kwi-18 Km Raiwind Road Lahore kwimizuzu nje emihlanu ukusuka e-Ada Plot Lahore Ring Road Junction. Siyimizuzu engama-20 kuphela ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseLahore Allama Iqbal International, iDHA Lahore yiMizuzu eli-18 kuphela ukusuka kwindawo yethu ngendlela yaseLahore. Amanye amanqaku abalulekileyo omhlaba akufutshane sisixeko sechibi, iBahria Orchid, isibhedlele saseBahria Orchid, iYunivesithi yaseSuperior. IZiko lokuthenga i-Emporium, idolophu yaseJohar, iDHA, iLahore Islamabd Motorway, iShareef Medical Complex, iRaiwind Markaz, iMall Road Lahore kunye neAzadi chowk ngeRing Road Lahore
Kubantwana kukho inani lezinto ezikhangayo njengeSafari Zoo kwindlela yaseRaiwind (imizuzu eyi-10), iSky (iTrampoline Park) eLake City (imizuzu esi-7). I-Lazer Tag, izilingisi zeqakamba, i-Ice skating, i-3 kunye ne-4D imidlalo inkundla yokutya enkulu yonke e-Emporium Shopping Mall Johar Town Lahore (25 to 30 Minutes).
Uluhlu lwenani leendawo zokutyela ezihanjiswayo ezinikezela ngokutya okumnandi kufutshane luyafumaneka kwiflethi.
Sinokukunceda ekwenzeni usuku lwakho lube lugqibelele ngokubhukisha kunye nokucebisa ngento omawuyityelele kwaye utye iindawo eLahore.
Umbuki zindwendwe ngu- Zarmina